Olona Dolophi luthembekileyo lwezesondo Isishwankathelo seAlbham
Iphepha lealbham eligcwele kakhulu
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi malunga nonodoli bezesondo? Wamkelekile kunodoli wabarhwebi. Apha unokufumana iintlobo zeemilo zomzimba kwaye utshatise iintloko ezahlukeneyo ezintle. Khetha indibaniselwano oyifunayo koku unodoli wesondo iphepha lealbham. Abantu abaninzi banokuhlangabezana neengxaki ezininzi xa beqala ukuthenga oonopopi besini. Le yindawo yokubonisa oonodoli. Ulwazi malunga nonodoli lugqityiwe, unokuzibona zinxibe iimpahla ezahlukeneyo kunye nokwenza.
Zininzi izizathu ezisemthethweni zokuba umntu axhomekeke kwinkonzo yedoli yesondo. Mhlawumbi uneentloni kwaye awunakuba nabanye abantu, okanye ufuna ukuphucula izakhono zakho zokwabelana ngesondo ngaphambi kokungena kwilizwe lokwenyani. Le albhamu yesondo yedoli yesini ayilungelanga ii-novices kuphela, kodwa nabantu abathanda oonodoli.